Ithegi: amatikiti | Martech Zone
Iindlela ezi-7 zekhuphoni onokuzibandakanya kubhubhane ukuqhuba ukuGuqulwa okungakumbi kwi-Intanethi
NgoLwesibini, Februwari 2, 2021 NgoLwesibini, Februwari 2, 2021 UJulia Krzak
Iingxaki zale mihla zifuna izisombululo zale mihla. Ngelixa oku kuvakala kuyinyani, ngamanye amaxesha, iindlela ezifanelekileyo zokuthengisa ezindala sesona sixhobo sisebenzayo nakweyiphi na iarhente yomthengisi wedijithali. Kwaye ngaba kukho nantoni na endala kunye nesidenge ngakumbi kunesaphulelo? Urhwebo luye lwafumana ukothuka okwenziwe ngumhlaba obangelwe yi-COVID-19 bhubhane. Ngethuba lokuqala embalini, siqwalasele indlela iivenkile ezithengisa ngayo zijongana nemeko enzima yemarike. Ukutshixwa okuninzi kunyanzele abathengi ukuba bathenge kwi-Intanethi. Inani
I-Ecrebo: Ukuzenzela amava akho ePOS
NgoLwesithathu, Matshi 1, 2017 Lwesine, Matshi 2, 2017 Douglas Karr
Inkqubela phambili kwitekhnoloji ibonelela ngamathuba amangalisayo kwiinkampani zokuphucula amava abathengi. Ukwenza umntu akwenzi nzuzo kumashishini, kuyanconywa ngabathengi. Sifuna amashishini esihlala siwazi ukuba singoobani, asivuze ngokuxhaswa kwethu, kwaye enze izindululo kuthi xa uhambo lokuthenga luqhubeka. Elinye lelo thuba libizwa ngokuba yiNtengiso ye-POS. I-POS imele iNqaku lokuThengisa, kwaye sisixhobo esizisebenzisela ukuthengisa
Ngaba uhlawula ipremiyamu ukufumana izikhokelo ezitsha, okanye ubonelela ngesaphulelo ukuze ubatsalane? Ezinye iinkampani azizukuchukumisa amakhuphoni kunye nezaphulelo kuba boyika ukuthoba uphawu lweempawu zabo. Ezinye iinkampani ziye zaxhomekeka kubo, ngokunciphisa ingozi yokufumana inzuzo. Akuthandabuzeki ukuba bayasebenza okanye abayisebenzi, nangona kunjalo. I-59% yabathengisi bedijithali bathi izaphulelo kunye neebundles ziyasebenza ekufumaneni abathengi abatsha. Ngelixa izaphulelo zingaqhelekanga ekuqhubeni inzuzo yexesha elifutshane, zinokubangela umonakalo
Amanyathelo ama-26 okudala ishishini le-ecommerce eliphumelelayo ngo-2015
NgoMvulo, Aprili 20, 2015 NgoMvulo, Aprili 20, 2015 Douglas Karr
Ngo-2017, ukuthengiswa kwe-ecommerce kuqikelelwa ukufikelela kwi-434 yezigidigidi e-United States. Ngokwenene besiphuhlisa le ndawo ukongeza ezinye izisombululo ze-ecommerce kunye nezicwangciso emva kokuvavanya izisombululo ezizizo zokunika ingxelo kunyaka ophelileyo. Kuninzi okuzayo kwiinyanga ezimbalwa ezizayo-siyathembisa! Iiplatifomu ze-Ecommerce ziphuhlise le infographic ngezicwangciso ze-ecommerce eziza kukunceda uphuhlise ishishini elizinzileyo kwaye ujonge kwinto ekufuneka uyenzile ukuze uphumelele, ekujoliseni
Ngaba isaphulelo kwisaphulelo kwiBranti ngaphezulu kweSimahla?
NgoLwesibini, Matshi 17, 2015 NgoLwesibini, Matshi 17, 2015 Douglas Karr
Besinengxoxo emnandi malunga nengcaciso yam ezayo kwiNtengiso yeNtlalontle yeHlabathi malunga nokuba loluphi uhlobo lwesithembiso esinokuyenza kubantu abaya kwiseshoni yam okanye umcimbi wonke. Incoko yeza nokuba ingaba nasiphi na isaphulelo okanye ukhetho lwasimahla lunokuwuthoba ixabiso umsebenzi esiza kuwunika. Esinye sezifundo endizifundileyo kukuba xa ixabiso libekiwe, ixabiso lisetiwe. Ayenzi njalo